Waa maxay ka shaqeynta ereyga?
Maxay yihiin talaabooyinka la raacayo si tan si hufan loogu gaaro?
Waa maxay astaamaha gaarka ah ee Qoraaga WPS?
Sideed u isticmaashaa WPS si aad ugu qabato farsamaynta ereyga tayada leh?
Kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha koorsadani ay ka bixin doonto jawaabo sax ah, iyada oo ay ugu wacan tahay sharraxaad isku xigxiga iyo hawlo horumarineed oo la fahmi karo. Ku habboon kuwa bilowga ah ama kuwa dhexdhexaadinta ah ee jecel inay helaan madax-bannaanida abuurista, gelitaanka, qaabeynta iyo daabacaadda dukumiintiyada kala duwan ...
Qoraaga WPS: Hordhaca Hawsha Ereyga Janaayo 11th, 2021Tranquillus
READ Caawimaadda shaqaalaynta dhalinyarada: kordhinta ama dheereynta
horeAbuur dukumiintiyo dijital ah oo lagu saxiixay Zoho Sign
socdaIsku darka | Hagaha Dhamaystiran ee A ilaa Z
Aasaaska habraaca dambiyada